'Incredibles 2' ရဲ့ Trailer ထွက်ပြီ - MoviesFan
‘Incredibles 2’ ရဲ့ Trailer ထွက်ပြီ
၂၀၁၈ ရဲ့ အစောင့်မျှော်ခံရဆုံးရုပ်ရှင်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Incredibles2ရဲ့ Trailer ထွက်ရှိလာပါပြီ။ ဒီရုပ်ရှင်ကို လူတွေဘယ်လောက်တောင် စောင့်နေကြသလဲဆိုရင် Youtube ပေါ်တင်ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းမှာ view ၇ သန်းခန့်နဲ့ Trending #1 ဖြစ်နေတဲ့အထိပါပဲ။ ကိုယ်တွေလည်း ၁၄ နှစ်ကျော်ကြာ မျှော်လင့်ခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်ကားရဲ့ Trailer ဆိုတော့ စက္ကန့်မဆိုင်း ပြေးကြည့်လိုက်ပါတယ်။
Trailer က ပထမဇာတ်ကား အဆုံးသတ်သွားတဲ့ The Underminer အခန်းကနေ စတင်ထားပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီဇာတ်ကားမှာ အဓိကဇာတ်ဆောင်က Mr. Incredible မဟုတ်ပါဘူး.. သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့ Elastigirl ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆို Mr. Incredible က ဘာတွေလုပ်နေမှာလည်း.. သူက အိမ်မှာနေပြီး ကလေးထိန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ သားအငယ်ဆုံးလေး Jack-Jack ကလည်း စူပါပါဝါတွေ ရလာပြီဆိုတော့ Mr. Incredible ခမျာ သက်စွန့်စံဖျားနဲ့ အိမ်မှုကိစ္စတွေကို ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Incredibles2ရဲ့ဇာတ်လမ်းကို မူလဇာတ်လမ်းရဲ့ဖန်တီးရှင် ဒါရိုက်တာ Brad Bird ကပဲ ဆက်လက်ဖန်တီးထားပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်းပဲ ဒီ trailer ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ ပထမဇာတ်ကားကို အငွေ့အသက်တွေကို ပြန်လည်အောက်မေ့သတိရစေပါတယ်။ ဒီ trailer ထဲမှာ Incredibles ဇာတ်လမ်းကို လူတွေနှစ်သက်ကြရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေဖြစ်တဲ့ Family နဲ့ Comedy element တွေကို ရင်းရင်းနှီးနှီး ပြန်လည်မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Incredibles2ကို ကြည့်ခွင့်ရဖို့ အများကြီးစောင့်စရာမလိုတော့ပါဘူး… ၂၀၁၈ ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့ဆိုရင် ရုံတင်ပြသတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Previous Post: Woody Allen ရဲ့ အကောင်းဆုံး လက်ရာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Midnight In Paris
Next Post: ပရိသတ်တွေ ရင်ထဲကို နေရာယူအုံးမယ့် ဇဏ်ခီနဲ့ Christina Kyi တို့ရဲ့ Mudras Calling…